December 2017 – စာအုပ်မြို့တော်
ကိုယ်ကို သိမ်ငယ်စေနဲ့အချက်ကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါ လုပ်ရမှာကြောက်နေတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်သ၍ သင်ဘယ်တော့မှာသင့်ကိုသင် ယုံကြည်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆို သူများနှင့် ယှဉ်ရင် ကိုယ်က ခေါင်းငိုက်ပြီး သိမ့်ငယ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါဆို စိန်ခေါ်လိုက်ပါ … သတ္တိမွေးပြီး ရအောင် စိန်ခေါ်လိုက်ပါ .. ဒါဆို တစ်နေ့ သင်ဟာ လူ့အလယ်မှာ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ ယုံကြည်မှု အပြည့်နှင့် ရပ်တည်နိုင်မှာပါ… “အရင်မရခဲ့ဖူးတဲ့ အရာတွေကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ကမလုပ်ဖူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်လိုက်ပါ။ Credit; MyJobs
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 31/12/2017
​ အရာတစ်​ခုခု​ကြောင့်​ အခက်​ခဲ​တွေရှိလို့ စိတ်​ပျက်​​နေပြီဆိုရင်​ ကိုယ့်​အခက်​ခဲကို ဘာမှန်းမသိတဲ့လူ​တွေအ​ကြောင်း ​တွေး​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ အရိပ်​ခိုလှုံခွင့်​မရှိတဲ့ ဘဝဖို့ အားငယ်​​နေပြီဆိုရင်​ အရိပ်​ဆိုတာ ဘယ်​လိုအရာမျိုးလဲမသိတဲ့ ဘဝ​တွေကို ​တွေးကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​ပေါက်​ပြဲ​နေတဲ့ ​ခြေ​ထောက်​ကိုကြည့်​ပြီး ဖိနပ်​မစီးလို့ဝမ်းနည်းအပြစ်​တင်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​ ဖိနပ်​​တောင်​စီးခွင့်​မရှိတဲ့ ဘဝ​တွေကို​တွေးကြည့်​ပါ။ ရှုံးနိမ့်​သွားလို့ ကြိုးစားချင်​စိတ်​မရှိ​တော့ဘူးဆိုရင်​ ကြိုးစားခွင့်​မရှိတဲ့ဘဝ​တွေကို ကိုယ်​ချင်းစာကြည့်​လိုက်​ပါ။ လူတိုင်းကြိုးစားခွင့်​ရှိတယ်​ဆိုကြ​ပေမယ့်​ ကြိုးစားခွင့်​ရှိမှကြိုးစားလို့ရတဲ့ဘဝ​တွေရှိတယ်​ ကိုယ့်​ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ဘဝကို​လေးစားပါ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို မ​လေးစားသ​ရွှေ့ ဘယ်​သူကမှမင်းကို​လေးစားမှာမဟုတ်​ဘူး။ ​ရေဘူးထဲက ​ရေတစ်​ခွက်​​ရော့သွားရုံနဲ့ ​ရေဘူးရဲ့တန်​ဖိုးမ​လျော့သွားဘူး ဘဝမှာ ဆုံးရှူံးမှုတစ်​ခု​လျော့သွားရုံနဲ့ ဘဝ မပျက်​သွားဘူး။ ဘာမထီဘွား…အ​တွေးစာစု​လေးများ
လယ်သမားအိုကြီးတစ်ယောက်မှာ သူ့လယ်ကို ထွန်ယက်ပေးဖို့ မြင်းအိုကြီးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်..။ တစ်နေ့မှာ သူ့မြင်းကြီးဟာ တောင်တန်းတွေရှိတဲ့ဘက်ဆီကို ထွက်ပြေး သွားပါလေရော..။ အဲဒီ့တော့ လယ်သမားကြီးရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေက လယ်သမားကြီး ကံဆိုးလိုက်တာဆိုပြီး သနားနေကြသတဲ့ …။ လယ်သမားကြီးက “ကံဆိုးတာလား? ကံကောင်းတာလား? ဘယ်သူကသိမှာလဲ?” လို့ပြောသတဲ့ …။ တစ်ပတ်လောက်လဲကြာရော မြင်းအိုကြီးဟာ တခြားမြင်းရိုင်းအုပ်ကြီးကို ခေါ်လာပြီး ပြန်ရောက်လာသတဲ့ …။ အဲဒီ့အချိန်လဲကျရော အိမ်နီးချင်းတွေက လယ်သမားကြီးရဲ့ ကံကောင်းမှုကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြပြန်တယ် …။ လယ်သမားကြီးကတော့ “ကံဆိုးတာလား? ကံကောင်းတာလား? ဘယ်သူကသိမှာလဲ?” လို့ပဲ ပြောသတဲ့ …။ ရက်နဲနဲလည်းကြာလေရော …။ လယ်သမားကြီးရဲ့သားဟာ မြင်းရိုင်းတွေကိုယဉ်ပါးအောင် လုပ်ရင်းနဲ့ တစ်ကောင်ကို တက်အစီးမှာ ပြုတ်ကျပြီး ခြေထောက်သွင်သွင်ကျိုးသွားပါလေရော …။ အားလုံးကတော့ ကံဆိုးလိုက်လေခြင်းဆိုပြီးတွေးသတဲ့ ..။ လယ်သမားကြီးကတော့ […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 31/12/2017
အလုပ် လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံအတွက်
ကျွန်တော်တို့တွေ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို ဝင်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါ ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားခ(လစာ) ရကြတယ်။ တချို့က “လစာနည်းလို့”၊ “ငါ ရတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ ဒီလစာပဲရတယ်”၊ “ငါလုပ်ရတာနဲ့ ရတာမတန်ပါဘူး” “လစာမတတ်သေးဘူး စိတ်ညစ်ပါတယ်” အမျိူးမျိူးပြောကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတွေးမိတာရှိတယ်ဗျ… “ပိုက်ဆံတစ်ခုပဲလိုချင်လို့ အလုပ် လုပ်တာလား” (သို့) “လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (ပညာတစ်ခုခု) လိုချင်လို့ အလုပ် လုပ်တာလား” စဉ်းစားကြည့်ပါ… အလုပ်က အကိုတစ်ယောက် ဆုံးမဖူးတယ်။ “ပိုက်ဆံနောက်မလိုက်နဲ့”၊ “ရာထူးတွေ စိတ်ဝင်မစားနဲ့” မင်းတို့အရွယ်ဆိုတာ Manager Level ကိုရောက်ဖို့ Analyst အရင်လုပ်ရတယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်… ကိုယ့်ဆီမှာ ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိပဲ Manager နေရာ၊ Director နေရာ သွားထိုင်နေလို့မရဘူးလေ) ပြီးတော့ “လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်အားခ(လခ) ဆိုတာ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 30/12/2017
Chess ကစားရင် သူ့ဘက်ကြည့်
Chess ကစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ပြောဖူးတဲ့စကား မှတ်စရာ ကောင်းတယ်။ “ချက်စ်ကစားရင် သူ့ဘက်ကြည့်” တဲ့။ သိပ်မှန်ပါတယ်။ လူအများဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာပဲ စွတ်ပြီး လုတ်တတ်ကြတာပါ။ သူများ ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်နိုင်လဲ မစဉ်းစားကြဘူး၊ အမှန်က သူများ ရွှေ့မယ့် ခြေလှမ်းကို ကြိုသိဖို့ ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်။ သူ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသိရင် ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။ ရှောင်စရာရှိရင် ရှောင်နိုင်တာပေါ့။ အဲသလို သူ့ဘက်က ကြည့်နိုင်တဲ့သူဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ လူတော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အဘက်ဘက်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့လူ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သူ့ဘက်ကကြည့်ပြီး သူ့နေရာက စဉ်းစားတဲ့ကိစ္စမှာ အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်ဘက်က မှားဖို့ နည်းသွားပါပြီ။ အမိခံရမယ့် ဘေးနည်းသွားပါပြီ။ သူ့ခြေလှမ်းကိုသိပြီး ကိုယ် ဘာလုပ်ရမလဲလို့ တွက်ချက်ရတာလည်း […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 30/12/2017
အခက်အခဲနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကတော့ အချိန်မရွေး ကြုံရတတ်တာပဲ။ ●ဆင်းရဲတဲ့ သူချည်း အဆင်မပြေမှုရှိတယ် မထင်ပါနဲ့၊ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးလည်း အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ ●အညတရချည်းပဲ အဆင်မပြေဖြစ်တယ် မထင်ပါနဲ့၊ အထင်ကရတွေလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံရတတ်တာပါပဲ။ ●အခွင့်အာဏာမရှိတဲ့ သူမှ အဆင်မပြေဖြစ်တယ် မထင်ပါနဲ့။ ရာထူးအာဏာမြင့်မားတဲ့ သူတွေလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံရတတ်တာပါပဲ။ အဓိကကတော့ အဆင်မပြေမှုကို စိတ်က လက်ခံပြီးတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ဆက်ပြီး လုပ်သွားဖို့ပါပဲ။အခက်အခဲကို လက်မခံနိုင်ရင်၊လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလည်း မလုပ်နိုင်ဘူး၊ စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ အချိန်ကုန်သွားမယ်၊ဒါကြောင့် အခက်အခဲတွေ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာရင်…ဖြစ်သင့်လို့ ဖြစ်တာလို့ လက်ခံလိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ စွမ်းအားရှိသလောက် ကြိုးစားအားထုတ်ပါ၊အဆင်မပြေမှုကနေ အဆင်ပြေမှုဆီ တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Credit;【အရှင်တေဇာနန္ဒ- “စေတနာပန်းခင်း ဆရာတော်”】
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 29/12/2017
“ယူတတ်ရင် ရပါသည် မိတ်ဆွေ”
၁ . လစာကို အရင်မကြည့်ပါနဲ့ ၊ အတွေ့အကြုံကို အရင်ယူပါ ၂ . အရည်ချင်းရှိလာတဲ့အခါ ငွေက မိမိနောက်လိုက်လာပါလိမ့်မယ် ၃ . ကိုယ်က ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ ပိုပြီးအဆင်ပြေသလည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အမြဲသင်ယူလေ့လာပါ ၄ . အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာ ဖင်မြဲပြီး လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုရှောင်ပါ.. .သို့သော် ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်နေဖို့တော့ လိုတယ် ၅ . ဗဟုသုတပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ စာပေများကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး သတင်းမျာကိုလည်း ဖတ်ရှုပါ ၆ . ဘယ်အရာမှ ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သလိုမနေပါနဲ့ သို့သော် နေရာတိုင်းကိုတော့ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်စရာမလိုပါ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိပါစေ.. ၇ . လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အလုပ်တိုင်း ကိုယ့်ခြေရာတွေ ကျန်နေခဲ့ပါစေ ဆိုလိုချင်တာက anchievement […]
တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အလို မကျတဲ့အခါ ဒေါသထွက်တတ် ကြပါတယ်။ အဲဒီဒေါသကြောင့် မပြောသင့်တာတွေ ပြောမိတတ်သလို အရင် က ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခင်ခဲ့ပါစေ၊ ရန်သူတွေ လိုလည်း မုန်းသွား တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါသကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာ၊ သွေးတိုးတာ၊ နှလုံးရောဂါ ထတာစတဲ့ ဝေဒနာ တွေလည်း ဖြစ်တတ် ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသ ထွက်တဲ့အခါ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ အစားထိုး နိုင်ဖို့ အောက်ပါ အဆင့်တွေကို လိုက်နာ သင့်ပါတယ်။ အဆင့်(၁) ဒေါသထွက်တဲ့ အခါ ‘ငါဘာကြောင့် စိတ်တိုရ တာလဲ’ လို့အရင်ဆုံး စဉ်းစား လိုက်ပါ။ စိတ်တိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တကယ်ပဲ အရေးပါလို့လား၊ လူတစ်ယောက် ပြောစကား တစ်ခွန်းကြောင့် စိတ်တိုရတာ လား၊ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 29/12/2017
လူအများကို လွှမ်းမိုးနိုင်သူများ၏ တွေးခေါ်ပုံ တွေးခေါ်နည်း
တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ချို့ကိစ္စတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ထင်မြင်ယူဆထားသလို ဖြစ်မလာတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကတော့ အားလုံးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင့်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ကြပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် နည်းပညာလုပ်ငန်းချင်းအတူတူမှာ Apple က ဘာကြောင့်များ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ ရှိနေတာလဲ၊ လူမဲတန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေ အများကြီးထဲကမှ Martin Luther King ကို ဘာကြောင့် လူသိများရတာလဲ။ လေယာဉ်ပျံတီထွင်နိုင်တဲ့ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဘာကြောင့်များ Wright ညီနောင်က ထင်ရှားကျော်ကြားရတာလဲ ဆိုတာက စဉ်းစားစရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Apple၊ Martin Luther King နဲ့ Wright ညီနောင်တို့သာမက ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အခြားသော လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုဟ်တွေအားလုံးဟာ နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ တွေးခေါ်ပြုမူ၊ ပြောဆိုဆက်သွယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကလည်း ကမ္ဘာမှာ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ Golden […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 29/12/2017
အကြည့်​ရိုင်း​တွေ​ကြောင့်​ ​ခြေလှမ်းမှားနိုင်​ပါတယ်​ဒါ​ပေမယ့်​ ​ခြေ​ချော်​မကျ​စေနဲ့ သံသယ မျက်​လုံး​တွေကိုရင်​ဆိုင်​ဖို့မကြိုးစားနဲ့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို သာဂရုစိုက်​ပါ အလင်း​ရောင်​ဖြာတဲ့ မီးတိုင်​က​အောက်​​ခြေကိုသာ အလင်းဖြာခွင့်​ရှိတာ အထက်​ကို မထိုး​ဖောက်​နိုင်​ဘူး မ​ဖြောင့်​တန်းတဲ့လမ်းမှာ စိတ်​ဓာတ်​​တွေမ​ကောက်​​ကွေး​စေနဲ့ အ​ကြည့်​​တွေကို​ကြောက်​​နေရင်​ မင်းဘဝ ​ခြောက်​ကပ်​​နေမယ်​ မင်းဘဝအတွက်​ မင်းကိုယ်​တိုင်​လုပ်​ရမယ်​ သိ​အောင်​လုပ်​….တတ်​​အောင်​လုပ်​…​ဇောက်​ချလုပ်​ ဘာမထီဘွား…အ​တွေးစာစု​လေးများ
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 28/12/2017